Booqashada Madaxweyne Gaas iyo Gobolka Mudug – Radio Daljir
Seteembar 2, 2015 4:56 b 0
Arbaco, September 02, 2015 (Daljir) — Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wefdi balaaran oo uu hogaaminayo ayaa siweyn loogu soo dhaweeyey deegaanada Dhagaxyacade, Beyra, Xera jaalle iyo Degmada Galdogob ee Gobalka Mudug.
Wefdiga uu hogaaminayo Madaxweynaha oo isugu jira, Wasiiro , Xildhibaano, Waxgarad, maamulka Gobalka Mudug , Saraakiil katirsan Madaxtooyada Puntland iyo masuuliyiin kale ayaa ugu horeyn waxaa si habsami leh loogu soo dhaweeyey deegaanka Dhagaxyacade.
Cutub katirsan ciidanka Daraawiishta ee dawladda Puntland ayaa madaxweynuhu waxaa uu ka qaatay salaan sharaf, isagoona dadka deegaanka oo isugu jiray arday, haween, dhalinyaro , macalimiin iyo masuuliyiin kale uga mahadceliyey soo dhaweynta qiimaha leh ee ay u sameeyeen .
Deegaanka Xera jalle ayaa Madaxweynaha sidoo kale lagu soo dhaweeyey , waxaana soo dhaweyntiisa ka qeyb-qaatay Wasiiro , waxgarad, haween iyo dhalinyaro watay calamada Puntland , Soomaaliya iyo caleemo qoyan .
Madaxweynaha ayaa intii uu ku sugnaa deegaanka xera jaalle waxaa uu xariga kajaray MCH caafimaad oo ay dawladdu ka hirgelisay , waxaana siweyn looga dareemaya isbadal horumarineed oo deegaankaasi uu ku talaabsaday mudadii uu hogaanka dalka hayey Madaxweynuhu.
Degmada Galdogob ayaa boqolaal dadweyne oo isugu jira rag iyo dumar , maamulka degmada iyo waxgarad si maqaamsare leh ugu soo dhaweeyey madaxweynaha iyo wefdiga uu hogaaminayo.
Markii uu gudaha u soo galay madaxweynuhu Degmada Galdogob waxaa uu dhagax dhigay guriga hooyinka , xarunta maamulka degmada , Garoonka kubadda cagta, waxaana uu xariga kajaray xarun cusub oo loo dhisay dadka qaba xanuunka dhimirka.
Ugu dambeyn waxaa uu madaxweyne Gaas kormeeray kastamka Tur-dibi , halkaas oo xarumaha dawladda ee halkaasi laga dhisayo ay marayaan heer gebo-gebo ah , dhawaana la filayo in si rasmi ah uu u howl-galo kastamkaasi.